Wararka - Alaabta funaanadda ugu fiican
Qalabka ugu fiican ee funaanadda, Sida jawaabta su'aalaha badankood ee ganacsiga dharka caadada ah, waxay kuxirantahay. Xaaladdan, jawaabtu waxay ku xiran tahay isku -darka shuruudahaaga gaarka ah:
Sifooyinka aad raadinayso: jilicsanaanta, neefsashada, qaab-dhismeedka, qoyaanka, iwm.
Habka daabacaadda ee aad rabto inaad isticmaasho: si toos ah-to-dhar, daabacaadda shaashadda, daabac, iwm.
Qiimaha aad rabto inaad bixiso: miisaaniyadda ugu badan ee dalabka ama shay kasta.
Ujeedada shaatiga: isu keenista qoyska, labiska shaqada, dhacdada isboortiga, badeecadda, iwm.
Qofku wuu xidhan doonaa: kala duwanaanshaha da'da, qaabka, filashada.
La soco Tshirt 100% suuf ah haddii aad rabto shaatiyo jilicsan, raaxo leh, neefsan kara, jilicsan maqaarka, aan ku dhegganayn, laguna habayn karo hab kasta.
Maskaxda ku hay: waxaa laga yaabaa inay yara yara yaraadaan, wax yeeli karaan, duudduubi karaan, oo ay u muuqdaan inay qoyaan nuugaan oo xajiyaan, halkii ay u oggolaan lahaayeen inay dhakhso u uumi baxaan. Teebaha suufku wuxuu caan ku yahay qof walba sidaa darteed waa sharad ammaan ah.
Raac 100% polyester Tshirt haddii aad rabto shaadhadh khafiif ah, adkaysi leh, siman xariir leh, oo adkaysi u leh laalaabkii, yaraaday ama sii yaraanaya, oo lagu daray u oggolow qoyaanku inay si dhakhso ah u uumi baxaan.
Maskaxda Ku hay:Polyester -ku waa ka yar yahay neefsashada, dhegdhega, maqaarka oo xanuujiya, kuna xaddidan hababka daabacaadda. Qiimuhu wuxuu ka sarreyn karaa dharka kale, iyadoo ku xiran astaanta.
Raac isku dar ah Tshirt haddiiwaxaad rabtaa waxa ugu fiican labada adduunba. Dharka suufka ah 50/50 wuxuu ahaa isku-darka ugu horreeya ee ugu weyn, laakiin hadda waxaan leenahay saddex-isku-dhafka caanka ah ee sii kordhaya, kaas oo ku daraya rayon jilicsanaanta iyo dhejiska dheeraadka ah. Kadibna waxaa jira CVC, oo macnaheedu yahay isku -darka suufka. Saddex-isku-darka ayaa ah kuwa aan jeclahay.
Maskaxda Ku hay: Waxay u muuqdaan kuwo qiimahoodu sarreeyo, laakiin weli waa la awoodi karaa.